देउवा « Image Khabar
देउवा, निधि, सिंह र गुरुङको मोर्चाबन्दी, एक्ल्याईयो शेखरलाई
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला भिड्दै हुनुहुन्छ । सोमबार भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापतिका लागि
कांग्रेस सभापति मत गणना : ९ सय ५० गन्दा देउवाकाे ४ सय ५६, शेखरकाे कति ?
सुरुमा सभापतिको मतगणना भइरहेको छ । सभापतिको गणना सकिएपछि अन्य पदाधिकारीको मतगणना गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
एमाले महाधिवेशनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बाेधन गर्ने
एमाले महाधिवेशनलाई सम्बाेधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार बिहान चितवन जानुहुने देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र श्रीलंकाका राष्ट्रपति राजापाक्षेबीच भेटवार्ता
उहाँहरुबीच जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाल र श्रीलंकालाई पार्ने प्रभावको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।